१० प्रश्नोत्तर यौन–जीवनसँग जोडिएका !! | सुदुरपश्चिम खबर
१० प्रश्नोत्तर यौन–जीवनसँग जोडिएका !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ २१, २०७८ 37
यौनलाई दम्पतीले सहज रुपमै स्विकारेका हुन्छन् र स्वाभाविक क्रियाको रुपमा यसलाई लिने गर्छन् । तर, सबै दम्पतीको यौन जीवन सुखमय हुँदैन । उनीहरु यौनसँग सम्बन्धित कुनै न कुनै समस्याबाट ग्रसित हुन्छन् । कतै यौन क्रियाको क्रममा हुने दुखाइ त कतै शीघ्र स्खलनको समस्या । यावत् कुरा दम्पतीले मनभित्रै लुकाउने गर्छन् । आफ्नो यौन जीवनमाथि बहस गर्न चाहँदैनन् । अतः यहाँ केही त्यस्ता प्रश्नोत्तर पेश गरिएको छ, जो धेरैजसो दम्पतीका साझा समस्या हुन् ।
१. यौन क्रियाका क्रममा मलाई हल्का दुखाइ महसुस हुन्छ । म जान्न चाहन्छु कि, यसको कारण के हो ?
यौन क्रियाको क्रममा हल्का दुखाइ हुनुको कारण योनीको संकुचन वा रुखोपन हुनसक्छ । योनीको मांशपेशी खुम्चिंदै गएमा वा सुख्खापन भएमा यौन क्रियाको क्रममा दुखाइ अनुभव हुन्छ । रुखोपनबाट मुक्त पाउन जेल प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसैगरी फोरप्लेको समय बढाएर पनि योनीको रुखोपन हटाउन सकिन्छ । तर, तीव्र दुखाइ वा रक्तश्राव पनि हुन्छ भने चिकित्सकलाई भेट्नुपर्छ ।
२. मेरा श्रीमान मधुमेहका रोगी हुन् । मैले सुनेकी छु, मधुमेह ग्रस्त व्यक्तिको यौन जीवन त्यति राम्रो हुँदैन । के यो सत्य हो ?
मधुमेह मात्र होइन, अरु थुप्रै यस्ता समस्या हुन्छन् जसको असर यौन जीवनमा पर्छ । मधुमेहले कामेच्छालाई त प्रभावित बनाउँछ नै यौन सक्रियता पनि घटाइदिन्छ । अतः पूर्ण रुपमा उनीहरु यौन क्रियामा सहभागी नहुन सक्छन् । त्यसैले मधुमेह, उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न जरुरी हुन्छ । यसका लागि स्वस्थ र अनुशासित जीवनशैली, नियमित औषधि सेवन, व्यायाम आदि जरुरी हुन्छ ।
नियमित एवं दिनहुँ यौन सम्पर्क गर्नु कुनै खराब होइन । तर, यस कुराको ध्यान राख्नु जरुरी छ कि पार्टनरलाई जोड जबरजस्ती गर्नु उचित हुँदैन । उनलाई यौनका लागि बाध्य पार्नुहुँदैन । यदि दुवै पार्टनर इच्छुक छन्, समय र परिस्थिति अनुकूल छ भने नियमित यौन सम्पर्क गर्नु राम्रो हो । यसले सम्बन्धलाई अरु प्रगाढ बनाउँछ ।
४. तनावको स्थितिमा यौन सम्पर्क गर्नु उचित होला ?
हुन त कतिपय अवस्थामा यौन सम्बन्धले तनाव कम गर्छ । अर्थात् कतिपय अवस्थामा तनाव कम गर्नका लागि यौन सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ । तर, यसबाट तपाईं पूर्णत आनन्दित रहन सक्नुहुन्न । यसले गर्दा तनावमुक्त भएर मात्र यौन जीवनको पनि भरपुर आनन्द लिन सकिन्छ ।
तपाईं जस्तै महिलाहरु यस्तै सोच्छन् । उनीहरुलाई लाग्छ कि मोटोपनले गर्दा यौन जीवन भनेजस्तो आनन्ददायक हुँदैन । तर, सत्य यस्तो होइन । यौनमा आनन्द लिनका लागि शरीरको मोटोपन खास असर हुँदैन । यो शारीरिक क्रिया अवश्य हो, तर यसमा भावनात्मक सहभागिता बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यस्तो होइन । गर्भावस्थाको क्रममा यौन सम्पर्क गर्नु सुरक्षित हो । तर, केही कुरा भने ध्यान दिनुपर्छ । गर्भावस्थाको कुन चरण हो ? यौनमा के कस्ता आसन प्रयोग गर्ने हो ?
विवाहका सुरुवाती दिनहरुमा जस्तै यौन जीवनलाई ताजा र रसिलो बनाइराख्न तपाईंहरुले स्थान र आसन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । जस्तो कि, वेडरुमको साटो वाथरुम, लिभिङ रुम आदि । यस्तै फरक फरक यौन आसनले पनि तपाईंहरुको यौन जीवनलाई आनन्ददायक बनाउँछ ।
गर्भ निरोधक गोली चयन गरिरहँदा यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि त्यसको असर आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि हुन्छ । अतः आफ्नो शरीर अनुकूल गर्भ निरोधक गोली चयन गर्नुपर्छ । यसैले चिकित्सकको परामर्शमा यसको सेवन गर्नु एकदमै उपयुक्त हुन्छ । अनलाइनखबर बाट सभार